Waa maxay ECN | Baro faa'iidooyinka ECN Forex Broker oo run ah
Waa maxay ECN
Waa maxay ECN Forex Trading?
ECN, taas oo u taagan Shabakada Isgaadhsiinta Isgaarsiinta, runtii waa jidka mustaqbalka ee Suuqyada Suuqa Dibadda. ECN waxaa sida ugu wanaagsan lagu sharixi karaa buundo isku xirta kaqeyb galayaasha suuqyada yar yar iyo bixiyayaashooda cabbaanta ah ee loo maro 'FOREX ECN Broker'.
ECN waxay u adeegtaa sidii buundo udhaxeysa kaqeyb galayaasha suuqa iyo bixiyayaashooda cabitaan. Sidoo kale loo yaqaan nidaamyada ganacsi ee kale (ATS), ECN asal ahaan waa shabakad kombiyuutar u suurtagelisa ganacsiga lacagaha iyo kaydka ka baxsan isweydaarsiga caadiga.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in dhammaan macaamillada ganacsi lacageed la sameeyay ka hor sannadihii 1970-naadkii, iyadoo xadidan ganacsigu uu hadda jira 80-meeyadii. Waqtigaas, ku dhawaad ​​dhammaan ganacsiga elektiroonigga ah waxaa lagu sameeyay nidaam isgaarsiin oo horumarsan oo ay soo saartay shirkadda Reuters, laguna magacaabo Reuters Dealing.
Nidaamyada ganacsi ee casriga ah ee ganacsiga ayaa markii ugu horaysay soo shaac baxay horaantii 90maadkii markay bilaabeen inay isbarbar dhigaan iibsadayaasha iyo iibiyaasha si ay ugu noqdaan bartilmaameedka qiimaha lacagta. Ma aha in Shabakadaha Isgaadhsiinta elektiroonigga ah aysan hore u jirin; Xaqiiqdii waxay jireen ilaa iyo dabayaaqadii 1960-meeyadii laakiin looma adeegsanin sarrifka lacagta illaa iyo 90-meeyadii.
Waxyaabaha Ugu Horeeya Marka hore - Ogow Soo Bixiyahaaga
Suuqa Forex ayaa la sheegay inuu ka mid yahay suuqyada ugu caansan ganacsatada yar yar. Halkan, guulaha waxaa laga sameeyay isbeddellada qiimaha ugu yar ee labada nooc. Iyo si ka duwan ka ganacsiga saamiyada ama hantida, ganacsiga sarrifka lacagaha qalaad kama dhaco isweydaarsiga sharciyeysan.
Taabadalkeed, waxay ku dhacdaa inta u dhaxaysa iibsadayaasha iyo iibiyaasha ka socda qaybaha kala duwan ee adduunka, iyada oo loo marayo suuq iibka (OTC). Iyo, waa iyada oo aan la dhihin inaad u baahan tahay inaad u adeegsato dillaal si aad u hesho suuqaan.
Iyada oo loo eegayo maqaamkeeda baahsan, xulashada dillaaliinta saxda ah waxay macnaheedu noqon kartaa farqiga u dhexeeya guusha iyo guuldaraysiga ganacsigaaga Forex. In kasta oo ay jiraan suuqa dillaaliin fara badan oo jooga suuqa oo soo bandhigaya badeecado iyo adeegyo isku mid ah, waa inaad awood u yeeshaa inaad aqoonsato noocyada kala duwan ee dallaaliyeyaasha ka hor intaadan bilaabin ganacsiga Forex.
Sababta ugu weyn, waxaa jira laba nooc oo dillaaliin ah oo ku jira suuqa ganacsiga Forex: Sameeyeyaasha Suuqa iyo ECN Brokers. Sida magacu tilmaamayo, Soo-saareyaasha Suuqa waa nooca dillaaliinta dhiga bidida oo weydiiya qiime qiimeyaal iyagoo adeegsanaya nidaamkooda 'sidaas darteed' samaynta suuqa '. Qiimaha ay dejiyeen waxaa lagu muujiyaa qaababkooda maalgashadayaasha fursad u yeelan kara furitaanka iyo xiri kara boosaska ganacsiga.
ECN - Nooca 'Purest' ee Forex Broker Out halkaas
Iyada oo ay ka soo horjeedaan kuwa Sameeya Suuqa, the Shabakada Isgaadhsiinta Isgaarsiinta (ECN) Dillaaliinku faa iido kama helayaan farqiga faafitaanka, laakiin waxay ku dallacaan guddi boosaska ka sareeya. Natiija ahaan, guusha macaamiishoodu waa guushooda ama haddii kale ma awoodi doonaan inay wax faa'iido ah yeeshaan.
Bixiyeyaasha ECN waa khabiiro maaliyadeed oo adeegsada shabakadooda casriga ah ee casriga ah si ay macaamiishooda ugu xidhaan ka qaybgalayaasha kale ee suuqa. Isku-darka isugeynta ka soo qeyb galayaasha kala duwan, dallaaliyeyaasha ECN waxay awoodaan inay bixiyaan dalab adag / weydiiyaan fiditaan.
Ka sokow u adeegidda hay'adaha waaweyn ee ganacsiga iyo ganacsatada suuqa, dallaaliyeyaasha ECN waxay sidoo kale u adeegaan macaamiisha ganacsi ee shaqsiyeed. ECNs waxay u suurtagelisaa macaamiishooda inay ka ganacsadaan midba midka kale iyagoo diraya dalabyo iyo dalabyo ku saabsan nidaamka masraxa.
Mid ka mid ah soojiidashada ee ECN waa in kuwa wax iibsada iyo kuwa iibiya labadaba qarsoodi ku noqdaan warbixinnada fulinta fulinta. Ka iibinta ECNs waxay aad ugu egtahay isweydaarsiga tooska ah oo bixiya qiimeynta ugu fiican / weydiimaha qiimeynta sicirka lacagta oo dhan.
Iyada oo loo maro ECNs, ganacsatadu waxay helayaan qiimayaal ka sii wanaagsan iyo shuruudaha ganacsiga oo ka raqiisan sidii Dukaanle ECN waxay awood u leedahay inay u oggolaato qiimeyaasha bixiyeyaasha dareeraha kala duwan. Intaas waxaa sii dheer, jawiga ganacsiga ee uu bixiyo dillaali ECN waa mid hufan oo hufan, kuna sii daray rafcaanka ganacsiga.
Faa'iidada ECN - Waa maxay sababta aad ugula ganacsaneyso ECN Broker
Adeegsiga an Dukaanle ECN wuxuu leeyahay faa'iidooyin badan; run ahaantii, tiro badan oo ganacsato ah ayaa sugaya soo-saareyaasha ECN, waana sabab macquul ah. Dallaaliyeyaasha ECN waxay bixiyaan faa'iidooyin waaweyn oo kala duwan, kuwaas oo ka caawin kara iyaga inay ka hormaraan kuwa ay hoggaamiyeyaasha yihiin. Halkan waxaa ku yaal qaar ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee isticmaalka dillaalka ECN.
Aqoonsi, Sirta, iyo Sirta
Badanaa waxaad tahay buug furan markaad la macaamilayso ganacsiga caadiga ah ee Forex. Si kastaba ha noqotee, asturnaanta iyo xogdhowrka ayaa qaddarin weyn leh marka aad dooratid inaad ku sii socoto dariiqa dalabka ECN. Heerka sare ee sirta iyo sirta runtii waxay la xiriirtaa xaqiiqda in dillaaliyuhu kaliya u adeegi doono sidii nin suuqa dhexe ah halkii uu ka sameynlahaha suuqa.
Isbeddellada isbeddelka ah
Ganacsadayaasha waxaa la siiyaa marin habaabin ah oo ku aadan qiimaha suuqa iyadoo loo maro wakiilka ECN iyo koonto u go'an. Maaddaama qiimayaashu ay ku kala duwan yihiin sahayda, baahida, xasillooni darrada, iyo bey'adaha kale ee suuqyada, iyada oo loo sii marayo ganacsade ECN sax ah, qofku wuxuu ku ganacsan karaa iibka / dalabku aad u hooseeya.
Meelmarinta Ganacsi Degdeg ah
Astaantan waa wax ay ganacsatada Forex inta badan aan awoodi karin inay tanaasul sameeyaan. Dallaaliyeyaasha ECN waxay dammaanad qaadayaan in waxqabadka ganacsiga ee hufan uu aad u badan yahay meel kasta. Farsamadan gaarka ah ee ganacsigu uma baahna macmiilka inuu la ganacsado ganacsadeha, laakiin wuxuu adeegsadaa shabakadiisa si uu u dhigo amarada. Qaabkan kala duwan runti wuxuu qofkasta u ogolaanayaa inuu ku raaxeysto fulinta ganacsiga.
Gaaritaanka Macaamiisha iyo dareeraha
Wakiilada ECN waxay ku shaqeeyaan moodel u saamaxaya wax kasta iyo fursad kasta oo ay ku ganacsan karaan harada hoosaadka caalamiga ah ee la arki karo, la xakameeyo, iyo hay'adaha maaliyadeed ee kartida leh. Intaa waxaa sii dheer, iyada oo ay ugu wacan tahay sida macluumaadka iskuxiran loo kala qaado, daahfurnaanta ayaa wali ah faa iiddo kale oo muhiim u ah dallaaliye ECN. Dhamaan wakiilada ECN waxaa lasiiyaa fursad ay ku helaan isla xogta suuqa iyo ganacsiga; sidaa darteed, daahfurnaanta sicirka suuqa aasaasiga ah ee bixiyeyaasha dareeraha badan ayaa la dammaanad qaaday.
Mid ka mid ah faa iidooyinka ugu weyn ee macaamiil ECN iyo koonto ganacsi Forex ku xiran waa joogteynta ganacsiga. Marka la eego nooca ganacsiga Forex, biririfku lama huraan ma aha, waligeedna kama dhex dhacdo ganacsiga. Markii aad ka faaiideysato dillaaliye ECN, waad ku beddeli kartaa ganacsi amni ahaan inta lagu gudajiro munaasabadaha iyo wararka, iyadoo laga yaabo inay abuurto qulqulka dhaqdhaqaaqa dhabta ah. Tani waxay sidoo kale fursad u siisaa ganacsade kasta inuu ka faa'iidaysto qiimaha codka Forex.
Waa maxay faa'iidooyinka FXCC-ECN?
Hawlgallada ganacsi ee ECN waa qarsoodi, taasi waxay u saamaxdaa ganacsatada in ay ka faa'iideystaan ​​qiimaha dhexdhexaadinta, iyagoo hubinaya in xaaladaha suuqa ee dhabta ah ay ka muuqdaan marwalba. Ma jirto wax xakameyn ah oo ku aadan jihada macaamilka iyada oo ku saleysan labada midkood: istaraatiijiyada ganacsi ee forex, xeeladaha, ama jagooyinka suuqyada hadda jira.
Hirgalinta ganacsiga degdega ah
Macaamiisha FXCC-ECN waxay u wareegi karaan si dhakhso ah, iyaga oo ka faa'iideysanaya noloshooda, dejinta, qiimaha ugu wanaagsan ee lagu fulin karo suuqa, iyada oo si dhakhso ah loo xaqiijinayo. Habka FXCC-ECN wuxuu ka hortagayaa faragalinta qiimaha iibka, sidaa daraadeed dhammaan ganacsiyada FXCC waa kama dambeys ah isla markaasna la xaqiijiyay isla marka ay wax ka qabtaan oo ay buuxiyaan. Ma jiraan miiska wax laga qabanayo si loo soo farageliyo, marnaba wax dib-u-tirin ah.
Macmiilka, gelitaanka dakhliga
Nidaamka FXCC ee ECN wuxuu u fidiyaa macaamiisha fursad ay ku ganacsadaan hannaanka xisaabaadka caalamiga ah ee hay'adaha maaliyadeed ee habboon, kuwa aqoonta leh.
Cunto ganacsi oo cufan ah / quudinta xogta suuqa
Isticmaalka API-ga FXCC, macaamiishu si sahlan ayey ku xiran karaan algorithms trading, lataliyayaal khibrad leh, moodeelo iyo nidaamyada maareynta khatarta si ay u helaan macluumaadka noolaha suuqa iyo qiimaha qiimaha qiimaha. Xogta suuqa Soomaliyeed ee FXCC, oo dhexdhexaad ah, dhexdhexaadin karta waxaa ka mid ah dalabyada ugu tartamaya tartanka waxayna ku weydiinayaan qiimaha la heli karo waqti kasta oo laga helo suuqa. Taas oo keentay in geeddi-socodka ganacsiga uu yahay mid lagu kalsoonaan karo oo joogto ah marka la eegayo dib-u-socodka ganacsiga dib-u-eegista, ama ganacsiga nool.
FXCC waxay ka duwantahay ganacsadaha ama ganacsadaha maadaama FXCC aysan xakamayn doonin dalabka dalabka / dalabka bixinta sidaa darteed ma siin karno isku mid / dalab isku mid ah waqti kasta. FXCC waxay bixisaa kala duwanaansho run ah.
On ECN, macaamiisha ayaa si toos ah u hela qiimaha suuqyada. Sicirada suuqyada waxay u muuqdaan kuwo muujinaya sahayda, baahida, isbeddelka iyo xaaladaha kale ee suuqa. Nidaamka FXCC-ECN wuxuu u saamaxaa macaamiisha in ay ka ganacsadaan dalabka dalabka adag / dalabka bixinta, taas oo noqon karta mid ka hooseysa hal dhuun oo ku yaalla qaar ka mid ah kuwa waaweyn ee xaaladaha suuqa.